सरकार गठनबारे काँग्रेसमा छलफल - Nepal News - Latest News from Nepal
By nepalnews	 Last updated Oct 4, 2015
काठमाडौँ, १७ असोज । नेपाली काँग्रेसको आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सकेसम्म सहमतिको सरकार गठनका लागि सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्ने तय गरेको छ ।
बैठकपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार सोबारेमा पहिला प्रमुख तीन दलका नेताबीच सकेसम्म आजै छलफल हुने र त्यसपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका ३२ दलको सर्वदलीय बैठक बस्नेछ । उहाँले सहमतिका कायम गरेर सर्वसम्मत निकास निस्कन नसकेमा दोस्रो चरण (बहुमतीय) मा प्रवेश भई निकास निकाल्ने जनाउनुभयो ।
यही असोज १५ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि गर्नुभएको आग्रहका आधारमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सात दिनको समय दिई सहमतिको प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद्मा रहेका दलहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।
उहाँले आफूहरु सकेसम्म सहमतिको कोसिसमा रहेको बताउनुभयो तर प्रमुख तीन दलको साझा उम्मेदवारमा बन्न सक्ला ? भन्ने प्रश्नमा त्यो अहिले भन्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख दलबीच गत जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमति हुँदा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको होइन ? भन्ने जिज्ञासा उहाँले भन्नुभयो, “त्यो मलाई थाहा छैन, मेरो जानकारीको विषय होइन ।”
पदाधिकारी बैठकमा पार्टीको आगामी महाधिवेशनको तयारी र सङ्घीय ढाँचाअनुसार विधान बनाएर अघि बढ्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
भारतले पेट्रोलियम पदार्थ अझै दिएन,माथिको आदेश भन्दै इन्धन दिन आनाकानी